Muchidzidzo cheChirungu ichi, tichaona manhamba muChirungu. Kutanga, isu tinonyora manhamba echiChirungu kusvika gumi, ndiko kuti, manhamba eChirungu, kozoti manhamba echiChirungu kusvika zana, uyezve tinonyora mienzaniso zvirevo nezve nhamba muChirungu. Nhamba dzeChirungu elitecasino Tichadzidza nezve chiperengo nemataurirwo avo.
Mumusoro uyu pane nhamba dzeChirungu, tichafukidza misoro inotevera:
Manhamba anosvika zana muChirungu
Kuperetera uye kududzwa kwenhamba muChirungu
Nzira dzekubata nemusoro nhamba muChirungu
How to pronounce decimal numbers muChirungu
How to pronounce fractional numbers in Chirungu
How to pronounce percentages muChirungu
Maitiro ekuverenga mazuva uye makore muChirungu
Nzira yekunyora sei manhamba muChirungu
Nhamba dzeChirungu; Kungofanana nenhamba dzeTurkey, yakasikwa zvinoenderana neimwe nzira. Nekudaro, kana iwe ukanzwisisa kufunga kwebasa racho, iwe unozodzidza zvese zviperengo uye kududzwa kwenhamba nekukurumidza sezvazvinogona. Muchirevo chechinyorwa chino, chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kudzidza zvese zviperengo uye madudziro enhamba dzese kubva pa1 kusvika 100. Nekudaro, iwe unofanirwa kupa pekutanga kuti ukwane manhamba ese kubva 1 kusvika 10. Tinogona kutaura kuti kudzidza mamwe manhamba kubva pagumi kusvika kuzana zvichave nyore.
Zvichakadaro, ngatiwedzerei kanoti kadiki: Kana iwe uchida kudzidza nhamba dzese dzeGerman kubva pazero kusvika kumamirioni ane zvese zviperengo nemataurirwo adzo, ndapota ona chidzidzo chedu: German numbers
Zvino tinoenderera mberi nemusoro wedu wenhamba dzechirungu. Kutanga, ngatikupei mufananidzo, tozonyora nhamba dzacho muChirungu imwe neimwe.
Pazasi pane manhamba eChirungu kubva kune rimwe kusvika zana.
0 - zero (ziro)
1 - imwe (van)
2 - zviviri (tu)
3 - vatatu (tıri)
4 - ina (ye)
5 - shanu (kukanganisa)
6 - matanhatu (maccs)
7 - rudo (rudo)
8 - sere (eyt)
9 - mbuya (nayn)
10 - gumi (ganda)
11 - gumi nerimwe (elevin)
12 - gumi nembiri
13 - gumi nenhatu (mhemberero)
14 - gumi nemana (makumi mana)
15 - gumi neshanu (makumi mashanu)
16 - gumi nenhanhatu (sikstiin)
17 - gumi nenomwe (fara)
18 - gumi nesere (gumi nemasere)
19 - gumi nemapfumbamwe (nayntiin)
20 - makumi maviri (tuberty)
21 - makumi maviri nerimwe
22 - makumi maviri nemaviri (tuventi tu)
23 - makumi maviri nematatu (tuventiy tırii)
24 - makumi maviri nemana (for tuventiy)
25 - makumi maviri neshanu (tuventiy fayf)
26 - makumi maviri nematanhatu (tuventiy siks)
27 - makumi maviri nemanomwe (vanoda makumi maviri)
28 - makumi maviri nesere (tuventiy eyt)
29 - makumi maviri nemapfumbamwe (tuventiy nayn)
30 - makumi matatu (törtiy)
31 - makumi matatu nemumwe (törtiy van)
32 - makumi matatu nemaviri (törtiy tu)
33 - makumi matatu nematatu (törtiy tıri)
34 - makumi matatu nemana (for törtiy)
35 - makumi matatu neshanu (törtiy fayf)
36 - makumi matatu nenhanhatu (törtiy siks)
37 - makumi matatu-anoda (rudo törtiy)
38 - Makumi matatu nemasere
39 - Makumi matatu nepfumbamwe (Törtiy Nayn)
40 - makumi mana (fortiy)
41 - makumi mana nerimwe (fortiy van)
42 - makumi mana nemaviri (fortiy tu)
43 - makumi mana nematatu (fortiy type)
44 - makumi mana nemana (makumi mana e)
45 - makumi mana neshanu (fortiy fayf)
46 - Makumi mana nematanhatu (fortiy siks)
47 - Makumi mana nemanomwe (rudo fortiy)
48 - Makumi masere nemasere (fortiy eyt)
49 - Makumi mana nepfumbamwe (fortiy nayn)
50 - makumi mashanu (makumi mashanu)
51 - makumi mashanu nemumwe (makumi mashanu kombi)
52 - makumi mashanu nembiri (makumi mashanu tu)
53 - makumi mashanu nenhatu
54 - makumi mashanu nevana (makumi mashanu zve)
55 - makumi mashanu neshanu (makumi mashanu fayf)
56 - makumi mashanu nenhanhatu (makumi mashanu siks)
57 - makumi mashanu-vanoda (vanoda makumi mashanu)
58 - makumi mashanu nesere
59 - makumi mashanu nemapfumbamwe (makumi mashanu nayn)
60 - makumi matanhatu (siksti)
61 - makumi matanhatu nemumwe (fuck van)
62 - makumi matanhatu nemaviri (siksti tu)
63 - makumi matanhatu nenhatu
64 - makumi matanhatu nemana (for siksti)
65 - makumi matanhatu neshanu (siksti fayf)
66 - makumi matanhatu nenhanhatu (siksti siks)
67 - makumi matanhatu-anoda (kuda fuck)
68 - makumi matanhatu nesere
69 - makumi matanhatu nemapfumbamwe (siksti nayn)
70 - makumi manomwe (fara)
71 - makumi manomwe nemumwe (makumi manomwe van)
72 - makumi manomwe nembiri (makumi manomwe tu)
73 - makumi manomwe nematatu
74 - makumi manomwe nemana (makumi manomwe nemana)
75 - makumi manomwe neshanu (sevinti fayf)
76 - makumi manomwe nematanhatu
77 - makumi manomwe-anoda (rudo fara)
78 - makumi manomwe nesere (makumi manomwe eyt)
79 - makumi manomwe nemapfumbamwe (makumi manomwe nayn)
80 - makumi masere (eyti)
81 - makumi masere nerimwe (eyti van)
82 - makumi masere nemaviri (eyti tu)
83 - makumi masere nematatu
84 - makumi masere nemana (eyti ye)
85 - makumi masere neshanu (eyti fayf)
86 - makumi masere nevatanhatu (eyti siks)
87 - makumi masere-vanoda (kuda eyti)
88 - makumi masere nemasere (eyti eyt)
89 - makumi masere nemapfumbamwe (eyti nayn)
90 - Makumi mapfumbamwe (naynti)
91 - Makumi mapfumbamwe nemumwe (Naynti Van)
92 - makumi mapfumbamwe nemaviri (naynti tu)
93 - makumi mapfumbamwe nematatu
94 - makumi mapfumbamwe nemana (naynti ye)
95 - makumi mapfumbamwe neshanu (naynti fayf)
96 - makumi mapfumbamwe nematanhatu (naynti siks)
97 - Makumi mapfumbamwe nemanomwe (kuda naynti)
98 - makumi mapfumbamwe nemasere
99 - Makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe (Naynti Nayn)
100 - zana (van handird)
Paunenge iwe waziva ese manhamba kubva ku0 kusvika kugumi, unogona kuenderera mberi nekudzidza mamwe manhamba kubva pa10 kusvika 11. Nekudaro, sezvatakataura, chako chekutanga chinofanirwa kuve nhamba 100-1! Zvichakadaro, zero (10) yakanyorwa se zero muChirungu uye inoverengwa sa zirou.
Chirungu; Dzidzo pamusoro pemutauro uyu inova yakakosha sezvainoonekwa munzvimbo dzese dzehupenyu. Kune iro basa remunhu wese, yekudzidzira munda uye yakakosha zvido Chirungu anofanira kuvandudza ruzivo rwake! Panguva ino, avo vanotanga kudzidza Chirungu ndivo vekutanga ku Chirungu izwi vanofanirwa kukudziridza mazwi avo. Zvakare, zvakajairika Chirungu kutaura Maitiro ekudzidza anofanirwawo kutarirwa. Uye zvakare, semimwe mitauro yepasi, pane zvimwe zvidzidzo izvo munhu wese anofanirwa kudzidza muChirungu. Nhamba dzinouya kutanga!
Dzidza chirungu Chero chako chinangwa pachinzvimbo chako, iwe unofanirwa kunyatso dzidza chiRungu chakaenzana nenhamba uye nhamba. Zvikasadaro, iwe haugone kuenderera kune inotevera nhanho yedzidzo yeChirungu. Numbers; Inosanganisira mazwi anofanirwa kushandiswa nenzira isingadzivisiki pazvinhu zvese zvehupenyu hwezuva nezuva. Nhamba dzeChirungu uye chiperengo nemataurirwo avo zvinofanirwa kunyatsodzidziswa.
Nhamba dzeChirungu dzinofanirwa kudzidziswa zvinoenderana nechimwe chirongwa. Kunge mimwe mitauro, Chirungu chakavakirwa pane mamwe maitiro. Chirungu; hausi mutauro unodzidziswa nenzira isina kujairika kana yekumanikidza. Nekudaro, mushure mekunzwisisa izvo zvakakosha zvimiro zvekutaura nekunyora muChirungu, zvichave nyore kwazvo kudzidza izvo zvasara zvacho. Kudzidza manhamba muChirungu Inoenderana netsananguro iyi chaizvo.
Chii Chaunofanira Kuteerera PaKudzidza Manhamba muChirungu?
Nhamba dzeChirungu; Sezvatakambotaura, ine mutinhimira mukati mawo. Mune mamwe mazwi, inogadziriswa zvinoenderana nehumwe hurongwa. Ndosaka iwe uchigona kudzidza manhamba muChirungu zvakanyanya nyore. Kudzidza nhamba Zvinganzwika sezvakaoma. Panguva ino, iwe unofanirwa kutanga nekudzidza iyo manhamba 1 kusvika gumi. Kudzidza idzi nhamba hakuzove kwakaomera iwe. Nekuti isu tinofanirwa kuratidza kuti idzi nhamba dzaunoziva iwe muchikoro, paTV uye mune dzimwe nzvimbo zhinji.
Nhamba dzeChirungu dzine zvakanangana nezvakanangana. Nhamba dzese kubva pa12 kusvika 19 dzichava nyore kudzidza nekuwedzera - gumi nemana kusvika kumagumo. Panguva ino, tinogona kutaura kuti rako basa richava nyore kana uchidzidza manhamba munzvimbo yatakataura. Manhamba asiri e11 ne12 akarongwa zvinoenderana nemutemo watataura. Zvingave zvakanaka kudzidza manhamba makumi maviri, makumi matatu, uye makumi mana muzvikamu gumi.
Kuverenga manhamba pakati pe20-30 kana 30-40 zvichave nyore nekuti unozoshandisa iyo nhamba 9 yawakadzidza kare. Kudzidza manhamba mushure mezana kunoitwa mukati meimwe pfungwa. Kutanga, iwe unofanirwa kutaurira kuti mangani zviso izvo nhamba ine. ZanaMushure mekuita zvisarudzo zvakaita se, mazana maviri, mazana masere, iyo yakasara nhamba iri zana kusvika zana. Nhamba dzeChirungu Iwe unofanirwa kuenzanisa chikamu.
Kudzidza manhamba muChirungu Zvakanyanya kukosha! Kana uchishandisa mutauro wezuva nezuva wekutaura, kana zvasvika kune zvehukama kana zvepamutemo zvinhu Nhamba dzeChirungu inosangana nayo. Pamusoro peizvi, kuchikoro, kubasa, kumba, pakuhodha chikafu, kunyora petisheni, kutsanangura kero nedzimwe nzvimbo dzakawanda. Chirungu nhamba Iwe uchazoda ruzivo.
Kana iwe usingazive zvakaenzana zveChirungu zveiyo manhamba kana iwe uchiziva zvisina kukwana, uchasangana nematambudziko mazhinji. Muchokwadi, mazhinji emabasa ako achamiswa nekuda kwechikonzero ichi. Muchirevo chechinyorwa chino, iwe unofanirwa kudzidza manhamba echiChirungu pamwe nesiperengo uye kududza Kunyange, Kudzidza mutauro wechirungu unofanira kutanga nenhamba kutanga.
Exercises neNhamba muChirungu
Pane vanhu makumi matatu nemumwe vari mu sitting room. (Kune vanhu makumi matatu nemumwe vari mumba yekutandarira.)
Lionel Messi akahwina rake rechitanhatu Ballon D'Or mu2019. (Lionel Messi akahwina mubairo wechitanhatu weBallon D'Or mu2019.)
Vanhu mazana matanhatu vakasara vasina pekugara mushure mekukukurwa kwevhu. (Vanhu mazana matanhatu vakasiyiwa vasina pekugara mushure mekukukurwa kwenyika.
Ndakabvunza makumi maviri kuti ndinyarare. (Ndakukumbira kuti unyarare ka20.)
Akaenda France kechitatu muna 2020. (Akaenda kuFrance kechitatu muna 2020.)
Nzira yekuverenga sei Makumi Maseremu muChirungu?
Kuverenga madimikira muChirungu Zvinoitika neimwe nzira zvichienzaniswa neTurkey. Dimaliki poindi Ipo ichiverengerwa sechirevo, zvimwe zvese zvinoverengwa senhamba imwe neimwe.
5: pfungwa shanu
30: poindi matatu
75: nongedzera kanomwe neshanu
06: tarisa zero nhanhatu
95: maviri poindi mapfumbamwe neshanu
Nzira yekuverenga sei Fractional Numeri muChirungu?
Kuverenga zvidimbu zvidimbu muChirungu Pane zvakafanana pakati pekuverenga madhimoni nenhamba. Iyo numerator yezvikamu zvidimbu inoverengwa uchishandisa kuverenga manhamba, uye dhinomineta inoverengwa uchishandisa manhamba enhamba Pamusoro pezvo, kana iyo nhamba ichikura kupfuura imwechete, huwandu hwemaodha mudhinomineta hunoverengwa muuzhinji. Mutemo watiri kutaura nezvazvo unoshanda kune ese manhamba kunze kwenhamba 2. Kana nhamba iri mudhinomineta iri 2, mutemo wakasiyana unoshanda. Mumamiriro ezvinhu akadaro, kana numerator iri 1 sehafu, kana iyo numerator yakakura kudarika 1 hafu verenga se.
3/5: zvitatu zveshanu
5/8: mashanu masere
One: imwe hafu
3 / 2: mahafu matatu
Kuverenga sei Zvikamu muChirungu?
Kuverenga zvikamu muChirungu Zviri nyore kwazvo. Uye zvakare, isu tinofanirwa kutaura kuti kuverenga kweperesenti kwakakosha zvakanyanya. Inonyanya kushandiswa muhupenyu hwezuva nezuva uye hupenyu hwebhizinesi.
6%: Zvitanhatu muzana
30%: Makumi matatu muzana
36,25%: Makumi matatu nematanhatu maviri mashanu mashanu muzana
%zana: Zana muzana
500%: mazana mashanu muzana
Maitiro Ekuverenga Mari muChirungu?
Imwe nzira inoteverwa mukuverenga huwandu hwemari muChirungu. Kana uchiverenga iyo mari yemari, tanga kuverenga nhamba yese. Ipapo mari yacho inowedzerwa kusvika kumagumo. Panyaya yehuwandu hwehuwandu, inosangana kuverenga zvikamu zvisati zvasvika uye shure kwepfungwa yacho zvakasiyana. Zvakare, kana paine zita remari iri mumari iri kuverengwa, iri zita rinofanira kuwedzerwa kusvika kumagumo. Nekudaro, izvo zvataurwa pamusoro kuverenga madhimoni zvakasiyana. Ndosaka tichifanira kutaura kuti mitemo iyi inoshanda chete kumari. Isu tichatsanangura nemienzaniso kuti tinzwisise zviri nani chidzidzo!
$ 30: Makumi matatu emadhora
55 Euro: Makumi mashanu emaeuro
150 £: Makiromita zana nemakumi mashanu
12,66 Euro: Makumi nemaviri euros makumi matanhatu nematanhatu
$ 45,35: Makumi mana nemashanu emadhora uye masendi makumi matatu neshanu
Nekuda kweizvozvo, iwe unofanirwa kushanda zvakakomba mukuverenga iyo huwandu hwemari.
Maitiro Ekuverenga Matanho muChirungu?
Chirungu zvikamu zveyero Iyo yakapfupikiswa senge muTurkey. Kunze kwezvo, isu tinofanirwa kutaura kuti hapana kuoma pakuverenga zviyero. Izvo zvinokwanisika kurirava sezvarinoverengwa muchiTurkey.
50m: Makumi mashanu emamita
30 km / h: Makiromita makumi matatu paawa
12ft: Makumi gumi nemaviri tsoka
2tsp: teaspoon mbiri
Kuverenga Sei Makore muChirungu?
Senge muTurkey, kuverenga kwemakore muChirungu kwakaomesesa pane kuverenga akajairwa manhamba. Mumakore ane manhamba mana-manhamba, kunyanya manhamba maviri ekutanga anoverengwa sehuwandu. Ipapo isu tinofanirwa kutaura kuti manhamba maviri anotevera anoverengwa sehuwandu. Nekudaro, mune mamwe makore mamiriro aya haakwanise kushandiswa.
Kunyanya makore ekutanga zana ezviuru zvemireniyumu anofanirwa kuverengerwa sehuwandu hwakazara, kunyangwe iwo ari mana manhamba. Uye zvakare, zvakajairika kuti uverenge iwo manhamba maviri manhamba. Millennia, kune rimwe divi, inofanirwa kuverengerwa mune manhamba chero nguva uye chero kupi. Mazana emakore matsva anoverengwa sehuwandu, sezvaunogona kufungidzira. Mukuwedzera, izwi rokuti chiuru harishandiswe. Kunyanya kana uchiverenga chiuru chemakore apfuura, kushandiswa kweshoko rekuti churu hakubvunzwe.
Maitiro akasiyana anowanikwa mukuverenga makore matatu-manhamba. Zvakajairika kuverenga senhamba dzenhamba-nhatu, pamwe nekuverengwa senhamba yedhivhiti imwe ichiteverwa nenhamba yemadhigiri maviri. Makore maviri-manhamba anoverengwa senge manhamba sezvakaita mumienzaniso yapfuura. Kunze kwezvo, unogona kushandisa chirevo "gore" uchiverenga chero gore kudzivisa chero nyonganiso. Nenzira iyi, zvinoreva gore zvinogona kuitwa zvakanyanya. Nekudaro, iko kusimbisa kwatataura kunoitwa chete kana uchiverenga maviri kana matatu makore manhamba.
Uye zvakare, makore asati gore "0" ari BC Inoverengwa nekuwedzera. BC inonzi "bisi". Tinogona kutsanangura maitiro ekuverenga makore nemiyenzaniso!
2013: Makumi maviri negumi nematatu kana zviuru zviviri nezvitatu
2006: Zviuru zviviri nezvitanhatu
2000: Zviuru zviviri
2020: Zviuru zviviri nemakumi maviri
1500: Makumi nemashanu nemazana
1850: Gumi nemasere makumi mashanu
26: Makumi maviri nenhanhatu
3000 BC: zviuru zvitatu BC
Chekupedzisira, isu tinofanirwa kutaura nezve maitiro ekuverenga zero. Kushandiswa kweZero kunowanikwa muBritish neAmerican English. kn chirevo chinonyanya kushandiswa mumhedzisiro yemakwikwi emitambo. Naught chirevo chisingashandiswe muUSA.
Kana zvasvika kumutauro wepasirese, funga kutanga Chirungu mari. Izvi hazviitiki netsaona. Muchokwadi, isu takanzwa mitsara yekuti mutauro wakajairika wepasi rose Chirungu kakawanda. Panguva ino, tinogona kutaura zviri nyore kuti Chirungu ndiwo mutauro unotekeshera munyika. Nekudaro, munhu wese anoshamisika kuti chiRungu chave sei chakakurumbira.
Chirungu chapararira; Izvo ndezve maitiro akaitika mushure meRevolution Revolution. Nekuda kwekudyidzana kwenyika dzepasi rose, Chirungu chakatanga kuzviwanira nzvimbo pachayo. Mutauro wepasirese; hausi mutauro unonyanya kutaurwa pasi rose. ChiChinese; pamwe mutauro unotaurwa nevanhu vazhinji. Nekudaro, haina kunge yakabudirira pakuve wakakosha mutauro seChirungu.
Tinogona kutaura kuti mutauro wave wepasi rose nekuda kwezvikonzero zvehupfumi nezvematongerwo enyika. Kutevera zviitiko zvakasangana mushure meRevolution Revolution Kudzidza Chirungu rava kutenderwa. Pamusoro pezvo, chokwadi chekuti chiRungu chakataurwa munhepfenyuro kweanopfuura makore mazana mana ndicho chimwe chinhu chinoita kuti chive chakakosha. Kugadzwa kwesangano renhau rekutanga repasi rese muLondon budiriro inosimbisa ruzivo urwu.
Sei Chirungu Chakava Mutauro Wenyika?
Chirungu; Kunyangwe iri mutauro wakabata pasi kwenguva yakareba mazuva ano muma2020, hauna kuwana chinhu ichi nekukasira. Mushure mekuitika kwenhoroondo, tinogona kuti Chirungu mutauro wakabata pasirese. Chirungu; Sezvo uri iwo mutauro wepamutemo wenyika dzine hupfumi, hunyanzvi uye kwesainzi simba, zvave nyore kupararira pasirese. Zvisinei, tinogona kutaura kuti pane zvimwe zvinhu zvinoita kuti chiRungu chibude mukutaurirana kwepasirese.
Kukura kwehumambo hweBritain
Kupinda kweUnited States senyika ine hutongi mushure mekurasikirwa kwesimba rehumambo hweBritain
Kubuda uye kupararira kweiyo banking system
Kuwedzera kwehukama pakati penyika uye kudiwa kwemutauro wakafanana nekuda kwechikonzero ichi
Kubuda uye kuwanda kweterevhizheni nenhepfenyuro, kunyanya sinema
Kufambira mberi kunoonekwa mukutsvaga kwesainzi uye zvidzidzo zvedzidzo
Kunyangwe iyo internet isati yave pamusika, ichiwedzera mikana yekuti vanhu vawane ruzivo
Nekuda kweizvozvo, tinogona kutaura kuti zviitiko zviri pamusoro izvi zvakakosha muchirungu kuva nhasi.
Ndezvipi Kukosha kweChirungu muNguva Yedu?
Zera redhijitari, iro rakavambwa muma1990; Mune ma2000 uye mumashure, nema2010, yakatanga yakakomba nzira yekuvandudza uye ikava nhasi. Kutsakatika kwemiganhu; inokwevera kutarisisa seyakanyanya kukosha budiriro yedhijitari zera. Mune mamwe mazwi, munhu anogara muTurkey; Inogona kutaurirana nevanhu vanogara kune rimwe divi renyika chero nguva, kunyangwe paine mutsauko wenguva nenzvimbo. Panguva ino, tinogona kutaura kuti vanhu venzvimbo dzakasiyana vanoda mutauro wakajairika. Chirungu; Yakakwanisa kuve mutauro wakajairika wevanhu nemasangano kwenguva yakareba kwazvo.
Kuti ubatsirwe nezvivakwa zvinopihwa nenyika chaiyo kwatiri Chirungu shanduro dzinodiwa kupfuura nakare kose. Ose mawebhusaiti uye nharembozha; Inoshandisa Chirungu semutauro unozivikanwa. Uye zvakare, e-commerce, iyo inotsiva yechinyakare kutengeserana, zvakare inoshandisa Chirungu. Mune mamwe mazwi, zvinova zvakakosha kuti iwe uzive Chirungu kuitira kuti uverenge, unzwisise uye ubatsirwe kubva kune zvese zvaunoona mune rakaperera nyika!
Nei Chirungu ichikosha Paunenge uchipindura mubvunzo, zvakafanira kutaura nezvezvinhu zvinoshanda kuti vanhu vanzwisise. Zivo yeChirungu yakakosha kutevera kwesainzi uye tekinoroji zviitiko. Semuenzaniso, zvese zvakabuditswa zvakagovaniswa nezve coronavirus, zvidzidzo zvekudzivirira uye zvimwe zvakawanda nyaya; inowanzo sanganisira zviwanikwa zvekunze.
Uye zvakare, isu tinogona kutaura kuti vanhu chero kupi pasi pano vanogona kutaura kune nyika yese pese pavanoda. Kutenda kumavhidhiyo eChirungu akaiswa paYouTube, huwandu hwevanhu vanosangana nemikana yakasiyana zvachose yebasa uye yedzidzo haisi mashoma! Kune zvakare vanhu vanotaura kuzviuru zvevateveri nekutepfenyura vapenyu padandemutande! Mavhidhiyo nezvakatumirwa; Iri kupararira nekumhanya kwechiedza, sekutaura, painternet. Nekudaro, chero munhu anoda kuti izwi ravo rinzwike Chirungu unofanira kuita!
Tinogona kutsanangura nemuenzaniso wakanaka kuti kuziva Chirungu kunogona sei kuparadza miganhu. Greta Thunberg anobva kuSweden, ikozvino 18 makore; MunaAugust 2018, akatanga kuratidzira padanho rekutora danho pakurwisa shanduko yemamiriro ekunze. Kuratidzira kutarisisa nechiratidziro chechikoro chemamiriro ekunze, Thunberg; Akave ari muratidziri wemamiriro ekunze kubva ipapo. Chinhu chakakosha kupfuura zvese chinosiyanisa Thunberg nevamwe vamiriri hapana mubvunzo nzira yake yakanaka. Mune mamwe mazwi, Thunberg anotsanangura zvaari kuda kutaura nemitsara yakanyatsonaka uye matauriro ezwi; zvinoitawo simba rakasimba nechirungu chayo chikuru. Thunberg; Chirungu Dai anga ave achiri kuyaruka, pamwe angadai asina kumboita kuti izwi rake rinzwike kunyangwe aine chikonzero chakarurama!
Kushandiswa kweshanduro dzeChirungu zvakare yakafara zvakanyanya! Tinofanira kutaura kuti shanduro dzeChirungu dzinoshandiswa mukurapa, hunyanzvi uye nezvimwe zvakawanda, kunyanya hukama hwepasi rose. Uye zvakare, kunyanya mune yedhijitari nyika Shanduro dzeChirungu Iyo inoshandiswa mabasa anobudirira zvakanyanya. Kunyanya, zvinodikanwa kuti utaure kukanganisa kweChirungu mukushambadzira kwedigital. Kuvapo kwemikana yedhijitari kwakakosha zvakanyanya kuti makuru mabhureki akure uye ave epasi rose! Naizvozvo, kudiwa kweshanduro yeChirungu kwekambani yega yega kuri kuwedzera. Pamusoro pe, Shanduro yeChirungu Kune zvakare kuvandudzwa mumasevhisi ayo.
Nekuda kwekuwedzera kwekuda kwekushandura, hunyanzvi huri kuitwawo mumasevhisi ekushandura. Iko kuvapo kwemabasa ekushandura ekushandura zvakare kunogonesa shanduro dzeChirungu kugoverwa pasi rese. Nekuda kweizvozvo, tinogona kutaura kuti shanduro dzeChirungu dzakarurama pakati penyika yedhijitari yekutaurirana. Uye zvakare, zviitiko zvehunyanzvi zvinonyatsoteedzerwa nekuda kweshanduro yeChirungu. Mune mamwe mazwi, Shanduro yeChirungu; Nekugadzirisa kune inovandudza tekinoroji mikana nekukurumidza sezvazvinogona, inowana pachayo nzvimbo munzvimbo dzese.
Kune ese aya zvikonzero, tinogona kutaura kuti Chirungu chakakosha zvakanyanya muzera redu. Muzvikoro, nharaunda dzekushanda uye chero kwaunogona kufunga nezvazvo Dzidza chirungu Yakaguma kuve chinodikanwa uye ikava yekumanikidza.
# Nzira yekunyora sei manhamba muChirungu
# Nhamba dzeChirungu
# Chii Chaunofanira Kuteerera PaKudzidza Manhamba muChirungu?
# Exercises neNhamba muChirungu
# Nzira yekuverenga sei Makumi Maseremu muChirungu?
# Nzira yekuverenga sei Fractional Numeri muChirungu?
# Kuverenga sei Zvikamu muChirungu?
# Maitiro Ekuverenga Mari muChirungu?
# Maitiro Ekuverenga Matanho muChirungu?
# Kuverenga Sei Makore muChirungu?
# Sei Chirungu Chakava Mutauro Wenyika?
# Ndezvipi Kukosha kweChirungu muNguva Yedu?
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa dzinenge mwedzi mitatu yapfuura, Nyamavhuvhu 3, 26, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa muna Gumiguru 2021, 29.
Chirungu Possessive Pronouns
Chirungu Alphabet, Chirungu Tsamba
Tags: nhamba dzechirungu dzinosvika ku100, manhamba echirungu kusvika ku20, mataurirwo enhamba muchirungu, manyorerwo enhamba muchirungu, chirungu chenhamba